Degso City theft simulator APK loogu talagalay Android
Degso City theft simulator
Degso City theft simulator,
Simulator-ka xatooyada magaaladu waa ciyaar gacmeed u eg GTA oo aad ku raaxaysan karto ciyaarista haddii aad rabto inaad waqtigaaga firaaqada ku qaadato ciyaar ficil ka buuxdo.
Waxaan isku dayeynaa inaan ku dhisno boqortooyadeena dambiyada ee ku jira jilitaanka tuugada Magaalada, oo ah ciyaar ficil ku saleysan adduun oo furan oo aad ka soo dejisan karto oo aad bilaash ugu ciyaari karto taleefannadaada casriga ah iyo kiniiniyada adoo adeegsanaya nidaamka hawlgalka Android. Si taas loo sameeyo, waxaan u baahanahay inaan qaadno dhac xoog leh, tahriibinno baabuurta ugu raaxada badan oo aynaan boolisku qabsan intaan waxan oo dhan sameyneyno.
Booliisku maahan cadawgeena kaliya ee jilitaanka tuugada magaalada. Inta ciyaarta lagu jiro, waxaan la kulmi doonnaa xubno maafiya ah, burcad iyo burcad, waxaanna qoryahayaga u beddeli doonnaa harada xabadaha. Waxaan haynaa hub badan oo kala duwan oo aan ka dooran karno ciyaarta. Marka laga soo tago hubka caadiga ah sida bastooladaha, qoryaha darandooriga u dhaca iyo qoryaha darandooriga u dhaca, waxaan adeegsan karnaa hubka culus sida kuwa ridada gantaalaha.
Waxaad ku isticmaali kartaa gawaarida, afarta gawaarida lugaha iyo matoorada simulatorka xatooyada magaalada. Baacsashada booliiska ee xiisaha leh iyo iskahorimaadyo kulul ayaa kugu sugaya mishiinka tuugada Magaalada. Waxaa xusid mudan in ciyaartu aysan lahayn tayada garaafyada oo aad u sareysa.
City theft simulator Noocyada
Horumar: Good Thoughts Affect
Simulator-ka xatooyada magaaladu waa ciyaar gacmeed u eg GTA oo aad ku raaxaysan karto ciyaarista...
PUBG: Gobolka Cusub waa nooca cusub ee royale dagaal ee loogu talagalay kuwa sugaya PUBG Mobile 2....
Maraakiibta Dagaal ee Casriga ah waa ciyaar Android ah oo aad ku amreyso markabkaaga dagaalka...
Crossfire: Badbaadinta Zombie Shooter waa ciyaar jilbaha zombie gaar u ah barnaamijka Android....
Mario Kart Tour ayaa soo jiita dareenka sida ciyaar cusub oo ficil moobiil ah oo aad ku ciyaari...
Squad Alpha wuxuu booskiisa ka qaataa madal-ka Android si sahlan oo looga baran karo, dhex-dhexaad...
Clan N waa ciyaar garaacis moobiil ah oo kulmisa ciyaaraha qadiimiga ah ee arcade iyo kuwa casriga...
Ka qaybgal ficil dagaal culus oo royale ah oo ku saabsan tan gaarka ah ee kor ku xusan...
U diyaar garow nooc cusub oo ah dagaalka Pokemon ee Pokemon UNITE! Isku soo wada duub oo wajihi...
Hit Master 3D: Blade Assassination waa mid ka mid ah ciyaaraha moobiilka ee aan u maleynayo in ay...
Cidhibti Dheer! Waa ciyaar aad u xiiso badan oo moobiil ah oo aad ku beddelayso dabeecad xidhan...
Naqshadeynta loogu talagalay Android, Zombie Frontier 4 waa ciyaar caan ah oo loo yaqaan zombie...